Ogaden News Agency (ONA) – U Codee Ururka OYSU MN oo u Tartamaya abaaal marinta Torchlight
U Codee Ururka OYSU MN oo u Tartamaya abaaal marinta Torchlight
Posted by ONA Admin	/ May 28, 2014
Ururka OYSU MN ee cariga Mareykanka ayaa ku guuleystay in lagu daro abaal marinta sanadka 2014 ee Torchlight. Ururka OYSU ayaa abaal marintan ay ku tartamayaan 4 urur oo kasoo kala jeeda, Wadanka Kamaruun, Wadanka Kenya, Wadanka Nigeria iyo OYSU Somalida Ogaden.
Hadaba tartankan codeyntiisa oo socon doonta illaa maalinimada 30 May 2014, ayaa lala socodsiinaya taageerayaasha iyo xubnaha OYSU inay u codeeyaan Ururka OYSU si kaalintan ay ugu guuleystaan kowaad.
Xubinka Codeynaya waxaa laga rabaa innuu booqdo websiteka hoos ku xusan, islamarkaasna uu furto acountkiisa Facebooga ama google accountkiisa si uu u codeeyo, waxuuna codeyn karaa in kabadan 1 mar illaa boqol jeer, sidaas awgeed kolba kusoo noqo codeynta illaa maalinimada 30 May ugu danbeyn, oo u Vote garee saxiibada OYSU MN. Ku xisaabtan codkaaga innuu yahay mid qaali ah, marka ururka Torch light waxayba ku leeyihiin sidii oo deeq lacageed oo kale ah codkaaga u tixgali,,hadaad awoodo 100 jeer ayaad kusoo laaban kartaa si aad u abaal mariso OYSU MN.
Linkiga Codeynta waa kana
OYSU MN waa qodobka 4aad ee shaxda aad arki doonto, Sidaan horey kuugu sheegay furo Facebuuga ama gmailkaaga adoo dhinaca midigta calaamada F ee facebooga dooranaya kadibna guji oo u codee OYSU MN horteeda. Kusoo laabo marar kale oo badan illaa 100 Jeer waxaad xasuusnaata markasta oo aad kusoo laabato in deeq weyn ay u tahay OYSU MN, marka codkaaga ugu xisaabtan sidii lacag oo kale.
OYSU shahaadada hada lasiiyay ee ay ku tartamayaan waa shahaadadan hoose ka waran hadii Codkaagu siiyo abaal marinta kowaad ee sanadka 2014.